ယူဂန်ဒါသမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ကန်နီဝက်စ် - Yangon Media Group
ယူဂန်ဒါသမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ကန်နီဝက်စ်
ကမ်ပါလာ၊ အောက်တိုဘာ ၁၆
အမေရိကန်နာမည်ကျော် ရက်ပါကန်နီဝက်စ်သည် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်က ယူဂန်ဒါ သမ္မတ “Yoweri Muse-veni” နှင့် သွားရောက်တွေ့ ဆုံခဲ့ပြီး ယင်းတွေ့ဆုံမှုတွင် သမ္မတကို အားကစားဖိနပ်တစ်ရန် လက်ဆောင်ပေးခဲ့သည် ဟု AP သတင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
အသက် (၇၄) နှစ်အရွယ်ရှိ ယူဂန်ဒါသမ္မတသည် ဝက်စ်အား ဝမ်းမြောက်စွာ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် အနုပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ရေးအတွက် အား တက်သရော ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။ ဝက်စ်နှင့် ဇနီးသည် ကင်မ်ကာဒစ်ရှန်တို့သည် ယင်းအကြောင်းကို ၎င်းတို့၏ဖေ့စ်ဘွတ်တွင်လည်း ပို့စ်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့စုံတွဲသည် သမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံ အပြီးတွင် ယူဂန်ဒါသို့ အပန်းဖြေခရီး လျှောက်လည်ကြမည်ဖြစ်ကာ ယူဂန်ဒါ အမျိုးသားသဘာဝဥယျာဉ်နှင့် အခြား သော စိတ်ဝင်စားစရာနေရာများသို့သွား ရောက်ပြီး ယူ ဂန်ဒါခရီးသွားလုပ်ငန်းမြင့် တက်စေရေးအတွက် ထောက်ခံအား ပေးသွားမည်ဟုလည်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် လူငယ်လူဦးရေ အဆမတန်တိုးပွားလာနေသော ယူဂန်ဒါ နိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင် လိုအပ်မှု နှုန်းကလည်း တိုးမြင့်လာနေသည် ဖြစ်ရာ ယူဂန်ဒါအစိုးရအနေဖြင့် ကျဆင်းလျက်ရှိသော ခရီးသွား လုပ်ငန်းမြှင့်တင်လိုလျက် ရှိနေပြီး အစိုးရက ယင်းလုပ်ငန်းဆိုင် ရာများတွင် အခွန်လျှော့ချခြင်းနှင့် အခြားသောဖြေလျှော့မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်။ ကန်နီဝက်စ်တို့ဇနီးမောင်နှံကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်းမှာလည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ တိုးတက်စေရေး အစိုးရ၏လုပ်ဆောင် ပေးခြင်းမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ယခုနှစ် ကျင်းပမည့် နာဂရိုးရာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်တွင် မျိုးနွယ်စု ရိုးရာသူကြီး၏ အိမ်များ တည်??
ကနေဒါနိုင်ငံက ဆေးခြောက်ကို တရားဝင် အသုံးပြုခွင့်ပေးသည့် ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံ ဖြစ်လာ
ပြည်သူတွေ စိတ်မပျက်စေရပါဘူးဟု မကွေးတိုင်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြ?
ကျောက်နီမော်ကျေးရွာရှိ လူ ၃၃ဝဝ ကျော်ကို ဥပဒေနှင့်အညီ ကမန်တိုင်းရင်းသားအဖြစ် မှတ်ပုံတင် ထု?